Uncovering the Mysteries of the Mind - McKnight Foundation
Qeybta:Sheekada Saameynta4 min akhris
Xeeldheerida Mawduuca Mind
Huda Zoghbi wuxuu ku sii jeeday sidii uu u noqon lahaa kalkaaliye caafimaad markii ay la kulantay carruurta qabta jirro maskaxeed oo isbedeleysa mihnadeeda - waxayna sii xoojisay fahamkeena sida maskaxdu u shaqeyso.
"Dadku waxay ku noqdaan saynisyahannada dhammaan noocyada kala duwan," ayuu yiri Dr. Zoghbi, oo ku guuleystay abaalmarinta Predigious Prestige Prize ee Nololeedyada Nolosha ee shaqada ay ka socoto hawsheeda si ay u ogaadaan hiddaha lagama maarmaanka u ah habdhaqanka caadiga ah. "Waxaan noqday mid ka mid ah sababtoo ah waxaan qalbi jabay inaan u sheego waalidiinta wax aan laga qaban karin cudurka cunuggooda."
"Dadku waxay ku noqdaan saynisyahannada dhammaan noocyada kala duwan. Waxaan noqday mid ka mid ah sababtoo ah waxaan qalbi jabay inaan u sheego waalidiinta wax aan laga qaban karin cudurka ilmahooda. " -DR. HUDA ZOGHBI, LACAGEEDKA DHALINYARADA LOOGU TALAGALAY
Wuxuu ku dhashay Lubnaan, Dr. Zoghbi wuxuu markii ugu horreysey u yimid Maraykanka si uu u noqdo isbitaallada caafimaadka ee ajnabiga ah dabayaaqadii 1970-yadii markii dagaalkii sokeeye ee sii kordhay uu halis u yahay in ay dhamaystirto tababarkeedii Beirut. Sanadkii 1982, wali waxay ahayd neerfaha degganaa Baylor College College of Medicine markii ay la kulantay laba gabdhood oo ay la socdeen cilladda Rett, oo ah baadhitaan qanjidho oo dhif ah oo bilowday inay ku soo baxdo joornaalada caafimaadka ee Ingiriisiga ah. Bukaannada, da'doodu u dhaxayso 5 iyo 11, waxay ku dhalatay caafimaad, laakiin waxay raaceen wadada isku midka ah ee hoos u dhacdey horumarinta iyo xirfadaha dhaqdhaqaaqa, "waxay ku dhowdahay sidii loo soo daaweeyay," ayay tiri.
Sanduuqa Maaliyadda ee McKnight Fund for Neuroscience Conference, in ka badan 100 neurosiyiin ah ayaa isu yimaadaa si ay ugala hadlaan baaritaankooda ugu dambeeyay.
Dr. Zoghbi wuxuu ku qaatay 16 sano oo uu ku qaatay Baylor "dib ugu laabashada dhulka eber" si loo helo isbeddellada hidde-keena ee keentay xanuunka 'Rett'. Waa baadhitaan ah in hadda ay ka caawiso cilmi-baarayaasha in ay qeexaan meeshii ay ku beegsan lahaayeen daaweynta ee laga yaabo inay beddelaan kooraska isku-beddelka. "Aniga ahaan, qawaankan ayaa wali khuseynaya - markasta oo aan ku loolameyno isku dayga xallinta dhibaatada caafimaad - in yar ayaan ka ogaan karnaa nuqul cilmi-baaris oo aasaasi ah, wax badan ayaan ku leenahay. In badan oo aan ogaano waxa ku saabsan, hadana waxaan u badanahay inaan helno xalka. "
Aqoonsiga awoodda cilmi-baarista aasaasiga ah ayaa miisaaniyadda McKnight Foundation ku maalgelisay afar sano oo ka mid ah horumarinta neuroscience, ballanqaadka ka bilaabmay taageerida shakhsiyadeed ee aasaasaha iyo deeq-bixiyaha William McKnight. Laga bilaabo 1977, Maktabadda McKnight Scholar ayaa billaabay in ay taageerto cilmi-baarayaasha dhallinyarada ah ee xiiseynaya baaritaanka xanuunka garashada iyo xasuusinta luminta. Sanadkan gudaheeda abaalmarintan qaaliga ah ee xirfadda hore ayaa maal-galisay in ka badan 225 baarayaal cusub oo soo bandhigay boqollaal farsamooyin soo kabasho ah.
Dareemisku wuxuu muujin karaa qaabdhismeedka iyo dhaqdhaqaaqa maskaxda
Aaminaada Sare ee Cilmi-baadhayaasha
McKnight wuxuu ka mid ahaa hay'adaha ugu muhiimsan ee dalka ka jira si loogu dardargeliyo miisaaniyadda si loo helo faham fiican oo maskaxda ah si loo hagaajiyo ka hortagga, ogaanshaha, iyo daaweynta xanuunada barashada iyo xusuusta ee cudurka Ootiisamka illaa cudurka Alzheimers.
Kadibna wuxuu sii waday inuu abuuro ilo joogto ah oo maalgelin ah oo ku saabsan sayniska maskaxda iyadoo loo marayo The Sanduuqa Maaliyadda ee McKnight Fund for Neuroscience, oo ah hay'ad madax-bannaan oo maal-galinaysa $ 89 milyan oo cilmi-baaris cusub laga soo bilaabo 1987-kii. Dhimasho yar oo ka baxsan wareegyada neurosiyada, Sanduuqa McKnight Endowment Fund for Neuroscience waxaa hogaaminaya guddi qaran oo ka mid ah baarayaasha cilmi-baarayaasha ee mas'uulka ka ah xulashada tartamayaasha ugu sareeya saddexda tartan barnaamijyada abaal-marinta - Abaabulida Ciladaha iyo Cognitive Disorder, Abaabulka Teknoolajiyada Abaalmarinta Neuroscience, iyo Shahaadooyinka McKnight Scholar ee sii socota.
Dr. Huda Zoghbi ayaa aqbalay sannadkii 2017 ee Abaalmarinta Horyaalka ee Sayniska Nolosha.
Sanduuqa McKnight Endowment Fund ee Neuroscience ayaa sidoo kale martigeliya shir sannadeed oo kaliya oo martiqaad ah oo isku duba rida baarayaasha sare ee waddanka inay wadaagaan cilmi-baaristooda ugu dambaysay. Waa mashruuc isgaarsiin iyo wada shaqeyn xooggan oo Dr. Dr. Zoghbi, oo madax ka ah guddiga Agaasinka Guud ee Maaliyadda, ayaa isbarbardhigaya xerada xagaaga ee cilmiga maskaxda.
"Sanduuqa Maskaxda ee" McKnight Neuroscience Fund "waa nooc qurux badan oo ku maalgeliya xudduudaha cusub oo khatar geliya. Waxay abuurtaa dhaqanka sayniska waxayna taageertaa saynisyahanno yaryar si ay u xalliyaan dhibaatooyinka kale ee laga yaabo in laga tago, "ayaa yiri Dr. Zoghbi.
"Sanduuqa Maskaxda ee" McKnight Neuroscience Fund "waa nooc qurux badan oo ku maalgeliya xudduudaha cusub oo khatar geliya. Waxay abuurtaa dhaqanka sayniska waxayna taageertaa saynisyahanno yaryar si ay u xalliyaan masalooyinka kale ee laga yaabo in laga tago. " -DR. HUDA ZOGHBI, KOLA DAWEYNTA DARYEELKA
Afartan sanno ka dib markii ay maal-galintii ugu horreysay samaysay dareemaha neuroscience, McKnight hadda wuxuu tiriyay shan abaal-marin Qaran oo Saynisyahanno Saynis ah, sagaal Nobel Laureates, iyo in ka badan 80 xubnood oo ka tirsan Aqoonyahanka Aqoonyahanka Qaranka oo ka mid ah kalsoonida maskaxda ee aqoonyahanka. Inkasta oo baaritaanka kooxdu ay iftiimiyeen cudurka cusub ee maskaxda sida ay kala duwan yihiin sida autismka iyo cudurka Alzheimers, Dr. Zoghbi wuxuu sheegay in hooseeyaha guud ee shaqadooda oo dhan ay tahay rabitaan ah in la soo saaro qarsoodiga qaabdhismeedka qotodheer ee qotomiska ee caalamka.
"Waa sida in laguu siiyay buuggan, waadna ogtahay in meelo ka mid ah bogaggaas aad ka heli doontaan jawaabo cajiib ah su'aasha aad raadinaysay," ayay tiri. "Waa inaad sii wadaa boggaga ilaa aad ka ogaato."
Mawduuca: Sanduuqa McKnight Fund for Neuroscience
Abaalmarinta McKnight $1.2 Milyan ee Barashada Xanuunada Maskaxda
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: 2022 McKnight Awards Awards
Wakhtiga kama dambaysta ah: 2022 McKnight Awards Awards